ePR na-agbasa ahịa ... na Europe | Martech Zone
ePR na-agbasa ahịa… na Europe
Ebuputere GDPR na Mee 2018 ma ọ dị mma. Ọfọn nke ahụ bụ ịgbatị. Mbara igwe adabaghị na mmadụ niile na-aga ụbọchị ha. Morefọdụ na-enweghị nsogbu karịa ndị ọzọ. N'ihi gịnị? Maka na emere ka enyere nnwere onwe, nke akọwapụtara nke ọma na nke doro anya ugbu a n'aka nwa amaala Europe tupu ụlọ ọrụ enwee ike izipu ha ozi.
Ma ka anyị weghachite.
Ọ bụ na ndị dike akụrụngwa ahịa nke ụwa, HubSpot, Marketos wdg. Agwaghị anyị ọdịnaya bụ eze?
Ọ bụrụ na ị mepụta ya, ma mechie ya, ma kwalite ya, ha ga-abịa!
Mepụta ọdịnaya x10 nke mmeri, bulie ya, bido banyere ya na atụmanya ga-ahụ ya, budata ya ma lee ị ga-enweta nkọwa kọntaktị ha ma ị ga-enwe ike ịzụlite ha site na iji mkpọsa ozi email akpaaka yana ọkwa iji mee ka ị mara mgbe ha dị njikere ịzụta (n'ihi na ha ga-anọ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-ele anya na mkpirisi ọdịnaya dị ka ọmụmaatụ ọmụmụ, ikpe ngosi wdg).
Ọ bụghị ọzọ - ọ bụghị n'ụwa B2C. Mgbe ha na nbudata ọdịnaya nke x10 ahụ, ma hapụ nkọwa kọntaktị ha, ha kwesịrị ịkwanye obere igbe na-ekwu, sị:
Obi dị m ụtọ na ị na-ezitere m ozi site na mgbe ụfọdụ ozi na ịre ahịa.
Ya mere… onye ga - eji obi ya họrọ ibanye n’ahịa na ozi ahia?
Ya mere, ọdịnala ọdịnala / inbound / email na-adọta-ịzụlite-mmechi nsochi agbajila maka azụmaahịa B2C.
Mgbe ahụ, a nụrụ ụda ọchị.
"Gịnị bụ mkpọtụ ahụ?”Ndị ahịa B2C kwuru, anya mmiri ha gbara n’anya na-achọgharị maka ndị na-emekpa obi ọjọọ.
Ọ bụ mkpọtụ nke ndị na-ere ahịa B2B na-ama jijiji.
See na-ahụ GDPR adịghị egbochi ahịa B2B email (nke na-adịkarị na-adịkarị mfe). Naanị ugbu a achọrọ iji gosipụta na ị nwere ezigbo iwu ndabere maka nkwukọrịta email oyi. Nwere ike ịbụ nkwenye. Mana nwekwara ike ịbụ interest ezigbo mmasị. Ogologo oge i nwere ike:
… Gosiputara uzo i si eji data mmadu eme ihe kwesiri, nke nwere ihe nlere anya nke oma, ndi mmadu agaghi acho ya anya ma obu gha juo ihe i na eme doing
Office Commissioner Commissioner, Iwu gburugburu azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa, GDPR na PECR
Ndị na-ere ahịa B2B mekwara ahịhịa ka anwụ na-acha.
Anaghị enwu gbaa ogologo oge.
Iwu ePrivacy (ePR maka nkenke) ga-anọchi iwu European ePrivacy nke dị ugbu a (nke a na-atụgharị n'ụzọ ọ bụla dịtụ iche n'ụzọ dị iche iche na steeti EU) - na UK a maara ya dị ka PECR).
The DMA kọrọ na Julaị afọ gara aga na ePR ga-achọ… 'ịpụ apụ doro anya na nkwenye maka ahịa B2B email niile'.
Enweghị ndepụta. Enweghị nbudata ọzọ maka nkọwa kọntaktị. Byeaa B2B email ahịa. Nke a bụ nnukwu.
Iji maa atụ, Ana m arụ ọrụ na ụlọ ọrụ IT nke UK nke ukwuu. A na-ewu ọwa IT n'ụzọ zuru oke na agbapụ email. Ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B bụ. Maka mmejọ ya niile, ọ ka na-enye ROI na-akpali akpali yana maka ọtụtụ ụlọ ọrụ pere mpe, bụ naanị ụdị ahịa ha chere na ha nwere ike imeli (karịa na nke ahụ).
Maka onye ọ bụla n'ime gị na-eche na iwu a na-ada ụda siri ike na ahịa B2B nwere ike ịdị mma, ọ dịkwa mma ịtụle mmetụta ePR ga-enwe na kuki.
Na Machị afọ a, onye ndụmọdụ nọọrọ onwe ya na ụlọ ikpe kachasị elu nke EU, Advocate General Szpunar, nyere otu echiche na kuki ma kwuo n'ụzọ doro anya na igbe nkwenye kuki achọtara tupu emezue ọnọdụ maka nkwenye ziri ezi dị ka nkwenye ahụ anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-enye n'efu.
Ole weebụsaịtị ka ị na-eleta ndị na-eti ọkpọ kuki tupu akara? Ọtụtụ n'ime ha ziri ezi?
Anyị na-ele anya n’ọdịnihu ebe ị nweghị ike izipu ndị mmadụ ozi na ụlọ ọrụ (belụsọ na ha kwere ya) ma ị nweghị ike soro ndị mmadụ mgbe ha nọ na webụsaịtị gị (belụsọ na ha ahọrọ kuki). Akụkụ kuki nke amụma a emezuola na UK: the ICO kwuru nkwenye achọrọ maka kuki ndị na-adịghị mkpa na ị chepụtara ya, nchịkọta dabara na ngalaba na-adịghị mkpa (gaa na weebụsaịtị ICO - a na-agbanyụ nyocha na ndabara * gasps nke egwu *).
EPR kwesịrị ịhapụ ya na GDPR mana egbu oge. Ọ na-ewe oge iji kwado mmegharị na nzuko omeiwu Europe ma ọ nweghị ụbọchị ịhapụ ọkwa (blọọgụ iwu kwadoro nwere ike ọ bụghị tupu 2021) mana ọ na-abịa ma enwere obere oge iji kwadebe.
Ma ị kpọrọ ya foneelu ma ọ bụ iji efe efe, ụzọ ochie inboundlogy dị ka a ga-agbaji.
Ya mere, anyị jụrụ onye ahịa ahịa akpaaka anyị ihe ị ga-eme ( okwu maka mkparịta ụka email enwere ike ịchọta ya na blọọgụ anyị), mana TL: DR: chefuo nurture, gaa na ala nke foneelu, dị njikere ịzụta ndu - atụmanya tozuru oke.
Enweghị m ike ikwenye karịa.
Ihe dị mma bụ, SEO (mere n'ụzọ ziri ezi), ka dị ndụ ma na-egwu egwu. Nchọgharị ihe eji achọ ndụ na-eburu ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke clicks na mgbasa ozi akwụ ụgwọ (nke a ọhụrụ clickstream data na nke ahụ) na Google chọrọ ka ị nweta SEO ziri ezi ma mee ka ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla nnukwu ndu na mbipute nke Search Console emelitere.
Bido ịtụle mmetụta mmetụta ePR nwere na azụmaahịa gị. Ego ole ka ị na-adabere n'ịzụ ahịa email? Ego ole ka nchekwa data B2B gị abanyela? Nwere ike ịnyeghachi ha ikike tupu oge eruo? Needkwesịrị imezi mgbalị ịzụ ahịa na-ere ahịa iji lekwasị anya n'ịwelite ndị ahịa dị ugbu a karịa ịzụlite ndị ọhụrụ? Are na-arụsi ọrụ ike na profaịlụ ọchụchọ gị? Karịsịa, gịnị ka ị ga - eme ugbu a ịchọrọ ndị ọrụ ka ha kwenye ka enyocha gị na saịtị gị? Mee ka uzo ozo ndi ozo hazie ma di njikere iburu slack, ma mgbe obula ePR webatara, n 'udiri o bula o gha eme, igaghi ahapu gi iwere iberibe.
Tags: b2bọrụIwu nchịkwaeuahịapecriwu nzuzoụkpụrụ
Luke Budka bụ onye ntụzi na TopLine Comms, dijitalụ PR na SEO gị n'ụlọnga.
Netpeak Checker: SEO Nnukwu Nyocha na Nkpọrọgwụ Ngalaba na Peeji